युगसम्बाद साप्ताहिक - तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना
Thursday, 02.20.2020, 10:05am (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 05.30.2011, 03:49pm (GMT+5.5)
संघीयताको नाममा ‘एक मधेश एक प्रदेश’, ‘एक मधेश बहुप्रदेश’को नारा खुबै लाग्ने गरेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमा यस्तो राजनीतिक विकार घुसेको यो समयमा पृथ्वीनारायण शाहले वैदिक विधिविधान बमोजिम कायम गरेको राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न हुने त हैन भन्ने भय मडारिएको छ । राष्ट्र विखण्डनको संघारतिर गैरहेको चिन्ता पनि संगसंगै बढ्दैछ । ज-जसले तराई (मधेश)का बारेमा अहिले स्वायत्तता र एकलौटी हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्, उनीहरूले समग्र तराईको वैदिककालदेखिको महत्वलाई बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझपचाइरहेका छन् । यहाँ हिमाल, पहाड र मधेशबारेको एउटा प्रसङ्ग सुरु गरौं ः-
कुरा मकवानपुरबाट थालौं- यो कुनै बखत सेन राजाहरूको राज्य थियो भन्ने इतिहास छ । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली यो राज्य अन्तर्गत तराई (मधेश)को ठूलै भूभाग शासित थियो । आफ्नी विवाहिता पत्नी लिन ससुराली पुगेका पृथ्वीनारायण शाह र तत्कालीन मकवानपुरे युवराज अर्थात् जेठानसंगको खटपटमा यो इतिहास रङ्गमगिएको छ । नेपाल एकीकरणको प्रसङ्गमा यो इतिहास प्रारम्भिक अवस्थामा छ । सेन वंशका अन्तिम युवराजा दिग्वन्ध सेन पृथ्वीनारायण शाहका ससुराली खलक हुन् । मकवानपुरको ठूलो ऐतिहासिक महत्व छ । अञ्चल तथा जिल्लाको आधुनिक मानचित्र बन्नुपूर्व महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही लगायत पूर्वी तराईको मानचित्रसमेत यसैभित्र समेटिएको थियो । पाल्पाली सेन राजाहरूको राज्य पनि पश्चिम तराईसम्म फैलिएको थियो । तराई र पहाड मिलेर बनेको पाल्पा र मकवानपुरको सेन राज्यको यो इतिहासको आँखेझ्यालबाट हेर्दै अब तराई- मधेशको सांस्कृतिक चर्चा गरौं ।
तराई- मधेशको संस्कृतिको चुरो के हो त ? माक्र्सवादको संस्कृति मधेशको संस्कृति हो ? माओवादी वा अन्य कुनै वाद मधेशीको संस्कृति हो ? उपभोक्तावादी पश्चिमी शैलीको पूँजीवादी गणतन्त्र मधेशको संस्कृति हो ? युरोपमा क्रियाशील क्रिश्चियन डेमोक्य्राट पार्टीको जस्तै अभ्यास गर्ने संस्कृति वा पश्चिमी अवधारणाको नितान्त भौतिकवादी सोच वा जीवनशैली मधेशको पहिचान हो ? यसको उत्तर मधेशकै नेताहरूले कुनै न कुनै दिन दिनैपर्छ । तराई- मधेशको संस्कृति संयुक्त परिवारमा आधारित जीवनशैलीको स्रोतसम्मै पुग्ने संस्कृति हो । थारु जातिले पछिसम्म पनि यो जीवनशैली तराईमा कायमै राख्दै आयो । एकल पारिवारिक संस्कृति मधेशको संस्कृति होइन । यो संस्कृति जनक, सीता, बुद्ध प्रादुर्भाव गर्ने सांस्कृतिक परिचयबोधक क्षेत्रको मौलिक संस्कृति हो । अहिलेका मधेशी नेताहरूको खण्डित व्यक्तित्व र धुमिल भएको प्रभामण्डल, इच्छाशक्ति र मानसिकता यहाँ विवेच्य छ । मधेशमा नेतृत्व संकट छ । अन्धानुकरणको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । हिंसाको दावानलले दग्ध गर्ने कुचेष्टा छ । नेताहरूको खण्डित मानसिकताले राष्ट्र विखण्डन हुने भय छ । इत्यादि अनेक प्रकारका नाकारात्मक सोच छ । तराई- मधेशको नाम वेचेर, इतिहास मेटेर, आफ्नो राजनीतिक दुकान थाप्नेहरू मधेशलाई वर्वाद गर्दैछन् । यस्तो दृष्टिकोण विश्लेषकहरूबाट विश्लेषण हुने क्रममा छन् । तराई- मधेश सर्लक्क नेपालको मानचित्रमा कसरी समावेश भयो ? यो प्रश्नको उत्तर तराई-मधेशभित्रै छ । साम्राज्यवादको दबदबा र मुगल तथा अंग्रेजको अत्याचारबाट तराई कसरी बच्यो ? यसमा प्रवेश गर्नुपूर्व जनकयुगको रामायणकालमा पुग्नुपर्छ ।
समस्त पहाडिया मूलका क्षेत्री, बाहुन वा वैश्य लगायत चार वर्णका जीवनपद्धति तराई- मधेशकै सांस्कृतिक स्रोतसम्म जोडिन पुग्छन् । काठमाडौं उपत्यका होस् वा २२ से २४ से भुरेटाकुरे राजा रजौटाको कालखण्डमा पनि जनक दर्शन, बुद्ध दर्शन र मिथिलाञ्चलमा उद्भव भएका जीवनशैलीको यथामति यथास्थान प्रभाव छ । बुद्ध धर्ममा दीक्षित बुद्धिष्टहरु हिमाली भेगमा बसोबास गर्छन् । ‘बुद्धम् शरणं गच्छामी, धम्मम् शरणं गच्छामी, संघम् शरणं गच्छामी’ अनेक ऐतिहासिक कालखण्डमा निर्मित गुम्बामा हिमाल र पहाडमा यी शब्दावली गुञ्जिएकै छन् । बुद्ध अहिले पनि ध्यानमग्न मुद्रामा बसेकै छन् । बुद्धको उपदेश शिरोपर गरेर जीवनयापन गर्नेहरु हिमालदेखि तराईसम्म जताततै छन् । यसरी नै ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ श्रीरामको यो आदर्श हिमशिखरसम्म अझै प्रतिध्वनित भैरहेकै छ । याज्ञवल्क्य जस्ता तराई- मधेशमा विचरण गर्ने विद्वानहरूले विकसित गरेको जीवनपद्धतिबाटै पहाडियाहरूले आफ्नो दैनन्दिनी जीवनशैली अद्यापि व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यिनै याज्ञवल्क्यले रचना गरेको ग्रन्थबाटै काठमाडौं उपत्यकाको शासन प्रणाली व्यवस्थित गर्न झिकाइएका मैथिल ब्राह्मणहरूले मल्लकालमा समेत योगदान दिएको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यहाँ उल्लेख्य छ ।
याज्ञवल्क्य ईशापूर्व शताब्दीयौं अघि नै तराई- मधेशमा विचरण गर्ने विद्वान हुन् । उपनिषदकालीन वैशम्पायन ऋषिका शिष्य यिनी ऋषिहरूमध्ये अग्रणी र तत्ववेत्ता विद्वान पनि मानिन्छन् । याज्ञवल्क्य सम्बन्धी अनेक प्रसंग रोचक छन् । वृहदारण्यक उपनिषदमा यिनका पत्नीहरूको पनि चर्चा छ । कात्यायनी र मैत्रेयी नामका महिलाहरूका बीचको अंशवण्डाबाट अध्यात्मिक विद्याको प्रसङ्ग अगाडि बढेको छ ।
याज्ञवल्क्य अत्यन्त स्वाभिमानी थिए । उनले छादेको ज्ञान तित्राको स्वरुपमा ग्रहण गर्नेहरू तैत्तरीय कहलिए । याज्ञवल्क्यले सूर्यको उपासना गरेर प्राप्त गरेको वेदविद्या शुक्ल यजुर्वेदको रुपमा विकसित भयो । तराई- मधेशमा मनाइने छठ पर्व पनि सूर्यसंगै सम्बन्धित छ । गायत्री मन्त्र सूर्यकै वरपर घुम्छ । प्रतिदिन कुनै पनि कार्य वा कर्मकाण्डको विधि सम्पन्न गर्दा सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ । आदित्यहृदयस्तोत्रमा सूर्यकै वर्णन छ । नेपालको झण्डामा सूर्य अंकित छ । सूर्य मधेशको संस्कृतिकै अर्को परिचयबोधक ग्रह हो । वैज्ञानिक मतानुसार सूर्यबाट उछिट्टिएको एउटा टुक्रा नै पृथ्वी हो । थारु संस्कृतिमा माघी पर्वको ठूलो महत्व छ । वैदिक संस्कृतिमा माघे संक्रान्तिको दिनदेखि सूर्य उत्तरायण हुने हुँदा यो पर्वको स्रोत वैदिककालसम्म पुगेको ठहर्छ ।
यिनै मधेशी विद्वान महर्षि याज्ञवाल्क्यस्मृति अनुसार चौध विद्यामा चार वेद छन् । तिनका छ अङ्ग छन् । एक मीमांसा छ, अर्को न्याय छ । एउटा हो पुराण र अर्को धर्मशास्त्र । सारा संस्कृत वाङ्मय यिनै १४ विद्याभित्र समेटिएका छन् । चौध विद्याका अतिरिक्त विष्णुपुराणका अनुसार १८ विद्या छन् । याज्ञवाल्क्य स्मृतिग्रन्थमा १४ विद्यामात्र उल्लेख भएका छन् । विष्णुपुराणले धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद र अर्थशास्त्रको थप नामावलि दिएको छ । याज्ञवल्क्य स्मृतिअनुसार १४ विद्यालाई आधार मान्नेहरू पछिल्ला चार वेद अर्थात् आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद र गन्धर्ववेदलाई पनि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेदकै अङ्ग मान्छन् । चौध वा १८ जे जति संख्यामा विद्या विभक्त भए पनि यसभित्र सात सिद्धान्त समाविष्ट छन् । यी सात सिद्धान्त हुन्- पञ्चरात्र सिद्धान्त, कपिल सिद्धान्त, अपान्तरम् सिद्धान्त, ब्रह्मनिष्ठ सिद्धान्त, पाशुपत सिद्धान्त, हैरण्यगर्भ सिद्धान्त, शैव सिद्धान्त । यी सातै सिद्धान्त अनुसार संस्कृत वाङ्मयमा ३ सय शास्त्र छन् । ७० महातन्त्र छन्, जसलाई महाभारत शान्तिपर्व अध्याय १२२ श्लोक ३३ देखि ३६ श्लोकसम्म यसरी उल्लेख गरिएको छ ः-
"शतानि त्रीणि शास्त्राणां महातन्त्राणि सप्ततिः
योगशास्त्रं च सांख्यं च तन्त्रं लोकायतं तथा
तन्त्र बह्मतला नाम तर्क विद्या दिगौकसाम
सुखदुःर्खा जिज्ञासा कारणं चेति विश्रुतम् ।"
कपिलको सांख्य योगको महिमाको वर्णन श्रीमद्भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा श्रीकृष्णले गरेका छन् । यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णका अनुसार ‘सिद्धानाम कपिलो मुनि’ अर्को कपिलमुनीको विशेषता छ । यी कपिल मुनिकै वासस्थान कपिलवस्तु तराई मधेस नै हो । यस्तै याज्ञवल्क्य, कपिल वा बुद्ध सुवै तत्ववेत्ताहरूको सांस्कृतिक चुरो एउटै हो । त्यो हो पूर्वीय दर्शन । यो दर्शनको पृष्टभूमिमा अर्को पाटो छ- राजतन्त्र, जो त्रेतायुगको मर्यादापुरुष आदर्श श्रीरामसम्म पुग्छ । राजतन्त्रको अलिखित विधानका सार यिनै हुन् । यही संविधान अनुसार शास्त्रसम्मत राजतन्त्र प्राच्यमा चलेको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले गोरक्ष नीति अनुसार गुरु गोरखनाथको प्रियपात्र भएर एकीकरण गरेको राष्ट्र नेपालभित्र तराई अर्को शब्दमा मधेश कसरी समाहित भयो ? त्यो अत्यन्तै धनी संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पृथ्वीनारायण शाहले लिएको नीति के हो ? यी प्रश्नको उत्तर तराई वा मधेसमै खोजी हुनुपर्छ । साम्राज्यवादी शक्तिको कसरी मुकाविला गरियो र मुगल तथा ब्रिटिसकालमा तराई वा मधेस र पहाडले कसरी आफ्नो स्वत्व रक्षा गरे, यो इतिहासको अनुसन्धान पनि हुनैपर्छ । नेपाली भाषामा लेखिएको कविताका दुई पंक्तिले यसको केही छनक दिन्छ ।
तिनको यहाँ उद्धरण गरौं ः-
"हटाई फिरङ्गी जति हुन्छ चाँडो
पुगी आज गङ्गा पखाल्नु छ खाँडो ।"
पृथ्वीनाराण शाहले जोगाएर जगाएको नेपालको पेट मानिने तराई वा मधेशमा पृथ्वीनारायण शाहकै वंशवृक्षका युगपुरुष राजा महेन्द्रलाई स्मरण गर्ने मधेशीहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । राजा महेन्द्रले मधेशको सांस्कृतिक पृष्टभूमि र यहाँको महिमाकै मूल्य जोगाउन त्राहीमाम भएको तराई वा मधेशलाई पुनः जीवन दिने प्रयास गरे । सर्वप्रथम पूर्व-पश्चिम मेची-काली छिचोल्ने राजमार्ग मधेशबाटै सुरु गरियो । गैंडाकोटमा शिलान्यास भएको राजमार्ग मधेशको विकासका निमित्त आधुनिक युगको वरदान सावित भयो । राजा महेन्द्रकै प्रेरणाले तराई वा मधेशमा शहर विकसित भए । उद्योगधन्दा स्थापना गरिए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिए । तराई वा मधेशको कृषिलाई आधुनिक रुप दिन महेन्द्रले आफैं मधेशमै गएर हलो जोते । पातलो जनसंख्या ह्वात्तै बढ्ने गरी वातावरण अनुकूल बनाइयो ।
पहाडिया बस्ने कर्णाली प्रदेश लगायतका क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरेरै पनि तराई वा मधेशलाई विशेष महत्व दिने राजा महेन्द्रकै शासनकालले दबिएको तराई वा मधेश नयाँ अनुहारमा देखापरेको हो । यस्तो दृष्टिकोणको पनि व्याख्या विश्लेषण हुँदैछ । संक्षिप्तमा तराई- मधेशको इतिहास यस्तै छ ।
(प्राच्यको एक सूत्र ‘स्फोटवाद’ नामक पुस्तकबाट)